दशैं–तिहारमा “होण्डाको साथ ७” स्किम - Jana Aastha News Online Jana Aastha News Online
दशैं–तिहारमा “होण्डाको साथ ७” स्किम
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७८, सोमबार १७:४८
नेपालकालागि होण्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा. लि. ले दशैं तथा तिहार स्किम “होण्डाको साथ ७” ग्राहकवर्गहरु माझ ल्याएको छ । नेपालमै पहिलो पटक सात प्रदेशलाई समावेश गरिएको यस योजनामा हरेक प्रदेशबाट होण्डा खरिद गर्ने १ जनालाई रु. १ लाख प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
यस योजनाको समय अविधि भर होण्डाका ग्राहकहरुले स्क्रयाच कुपनमार्फत हातखाली नजाने गरी रु. १ लाखसम्म नगद उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछ । यसका साथै यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरुले, ७ वर्षको लागि स्पेयर पार्टस्मा ७% छुट, ७ वर्षसम्मका लागि ९ वटा बोनस सर्भिस कुपन प्राप्त गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी होण्डा बिग बाइकको खरिदमा रु. ४०,००० सम्मको क्यास ब्याक पाउन सक्नेछ । यतिमात्र नभई यस योजनामा तपाईंहरुले मात्र १ रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट, १ रुपैयाँको इएमआइ र १ % ब्याजदरमा समेत होण्डा खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
बम्परमा सहभागी १ जना भाग्यसाली ग्राहकहरुले रु. १५ लाखसम्मको नगद पुरस्कार जित्ने मौका स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रदान गरेको छ । यो योजना सीमित अवधिका लागिमात्र लागू हुने भएकाले आज नै होण्डाको ग्राहक भई यस योजनाको लाभ उठाउन कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
राजसंस्था फर्काउन राजधानीमा र्‍याली
आज बैठक नै बैठक : सिंहदरबारमा संसदको, च्यासलमा एमालेको
भारतमा १३ सय किलो गैंडाको खाग जलाइयो
बितिन् कमला भासिन
सशस्त्रका डिआइजीहरु कसलाई कहाँ पुर्याइयो ?
नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमाले दुबै बैठकमा व्यस्त
मुलुकमा खेत बाँझै, भारततिर सयौं क्विण्टल केराउ निर्यात